Amai Mugabe Vanonzi Vanosvova Kubuda muSouth Africa Mushure Mekukwirirwa Dare
Mudzimai wemutungamiri wenyika, Amai Grace Mugabe, vakakundikana kuenda kudare redzimhosva reRandburg muSouth Africa nemusi weChipiri uko vanga vachitarisirwa kutongwa nemhosva yekurova nekukuvadza zvakaipisisa mumwe musikana wemunyika iyi.
Izvi zvinonzi zvakaitika pane imwe hotera iri muSandton muJohannesburg usiku hwemusi weSvondo mushure mekunge Amai Mugabe vawana musikana uyu aine vanakomana vavo Chatunga Bellarmine naRobert Junior muhotera iyi.
Musikana uyu, uyo anonzi Gabriella Engels, anonzi akamhan’ara nyaya yake kumapurisa izvo zvakazoita kuti Amai Mugabe vaendeswe kumatare edzimhosva uko vanga vachitarisirwa nenguva dzahwani masikati.
Mamwe mashoko anoti Amai Mugabe vakazvipira voga kumapurisa mushure mekunge Gabriella amhan'ara kumapurisa, asi mamwe mashoko anoti Amai Mugabe havana kuenda kumapurisa zvichinzi vainge vatodzokera kuZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, avo vari muSouth Africa, vanoti zvakaitwa naAmai Mugabe zvinonyadzisa, kwete ivo chete, asi kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi.
Advocate Shumba vanoti kana chiri chokwadi kuti Amai Mugabe vadzokera kumusha vasina kupinda mudare, zvinoreva kuti pose pavachapinda muSouth Africa vanobva vangosungwa vachikandwa mujeri.
"Zvazvinongoreva ndezvekuti kana vachinge vatiza sechiitiko ichi zvinenge zvichingoratidza kuti havachakwanise kudzoka kuSouth Africa, kuzhe kwokuti vachitongodzoka futi vachizviendesa kumatare edzimhosva.
"Asi pavanozviindisa kumatare edzimhosva havachakwanisi kuti vangapiwa bail, kana kuti mari yekuti vahobhadhara vakatarisirwa kuzodzoka zvakare. Vanenge vakutovharirwa mujeri," Advocate Shumba vanodaro.
Taedza kubata gurukota rinoona nezvemapurisa muSouth Africa VaFilike Mbalula pamwe chete nemutauriri webazi rezvekunze kwenyika iyi VaClayson Monyela sezvo vose vati vanga vari mumisangano yeSADC summit iri kuitwa munyika iyi.
Zvichakadaro, bato reMDC-T rinoti rinoshora zvikuru zvakaitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe.
Mugwaro raburitswa nebato iri, mutauriri weMDC-T, VaObert Gutu vanoti chiitiko ichi chinokanganisa zvikuru chimiro cheZimbabwe.
Bato reMDC inotungamirirwa naMuzvinafundo Welshman Ncube raburitsawo mashoko ekushoropodza zvakaitwa naAmai Mugabe izvi richiti zvinoratidza kuti mhuri yekwaMugabe haichisingori chinyadzo chete asi kuti yatove kukanganisawo kugadzikana kwenyika.
Bato iri rinoti saAmai venyika, Amai Mugabe vaifanirwa kuve mucherechedzo wakanaka.